साँस्कृतिक पुर्नजागरणका लागि गाइजात्रा महोत्सव
नेवा खल कास्कीको आह्वान तथा महेन्द्रपुल तायमचा समिती पोखराको आयोजनामा शुक्रवार र शनिबार गाइजात्रा महोत्सब तथा तायमचा नृत्य प्रतियोगिता हुँदैछ । पोखराको महेन्द्रपुल सडकमा शुक्रबार दिँउसो २ बजे बाट उद्घाटन कार्यक्रम शुरु हुने कार्यक्रम २ दिन सम्म चल्ने छ । पहिलो दिन नेवारी साँस्कृतिक नृत्य, वाजा, तथा साँस्कृतिक कार्यक्रम हुनेछ । दोश्रो दिन प्रतियोगिता हुनेछ । महोत्सव वारे संयोजक मानकाजी माकाजुसंग गरिएको कुराकानी ।
गाइजात्रा महोत्सवको तयारी कस्तो छ ?
हाम्रो आन्तरिक तयारी लगभग पुरा भइसकेको छ । पहिलो दिन उद्घाटन कार्यक्रम हुनेछ । दोश्रो दिन प्रतियोगिता हुनेछ । पहिलो दिनको उद्घाटन पश्चात मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम पनि हामीले तय गरेका छौं । जस्तै, चेतनामुलक फेशन सो, लाइभ व्याण्ड कन्सर्ट तथा नेवारी साँस्कृतिक नाच तथा झलकहरु समेटेका छौं ।
कार्यक्रममा को मुल उद्धेश्य के हो ?
नेपाल बहुधार्मिक, बहुभाषी र बहुसांस्कृतिक परम्पराले सजिएको देश« हो । विभिन्न भाषा, धर्म र संस्कृतिको आफ्नै विशेषता बोकेको अनेकतामा एकता जातिय र सांस्कृतिक सद्भावको अनुपम उदाहरण यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सुन्दर पक्ष्ँ हो । नेपालका विभिन्न क्ष्ँेत्रहरु जस्तै पोखरामा पनि प्राकृतिकले जति सिंगारिएको छ । त्यसरी नै यस क्ष्ँेत्रमा बसोबास गर्ने बिभिन्न जात जातिका सांस्कृतिक परम्पराहरुले पोखराको सांस्कृतिक बैभवतामा थप आकर्षण पु¥याएको छ । त्यसैले पोखरालाई हामी स्वर्गभूमि भन्ने गर्छौं जहा“ हिमाल छ । पहाड छ, ताल तलैयाहरु छन् । लुकामारी खेल्दै बग्ने नदि र खोल्साहरु छन् । यिनै प्रकृतिको काखमा आफ्नै भाषा, आफ्नै धर्म र आफ्नै संस्कृतिको महत्वलाई बुझि अरुको पहिचानलाई सम्मान र आफ्नो पहिचानलाई संरक्षण गर्ने हाम्रँे संस्कारले हामी अझै सुसंस्कृत भएका छौं । कार्यक्रमको मुल उद्धेश्य भनेको हामीले मनाउदै आएको संस्कार र संस्कृतिको जगेर्ना गर्नु नै हो । साथै संस्कृतिलाई अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण गरि यसलार्य जिवन्त तुल्याउनका लागि पनि यो कार्यक्रम आवश्यक छ ।
गाइजात्रा पर्व पोखरामा पृथक छ । यहाँ नचाइने तायमचा नाचको महत्व के छ ?
किम्बदन्ती अनुसार राजा प्रताप मल्लको पालादेखि प्रचलनमा आएको गाइजात्रा पर्व र सो पर्वको उपलक्ष्यमा पोखरामा निकालिने “तायाः मचा नृत्य” को आफ्नै धार्मिक र सांस्कृतिक महत्व रहि आएको छ । यो परम्पराले पोखराको व्यापार व्यवसायको प्रवद्धनमा समेत टेवा पु¥याउदै आएको यर्थाथ हामी सबैलाई थाहा भएकै विषय हो । हिजो नेवार जातिमा मात्र सिमित रहेको यो परम्परा आज सबै पोखरेलीको साझा सम्पति भएको छ । करिब २५० वर्ष पुरानो यो सांस्कृतिक परम्परालाई जोगाउन हिजोका दिनहरुमा युनेस्को क्लब, पोखरा जेसिज, पोखरेली युवा सांस्कृतिक परिवारले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो भने पोखरामा नेवाः खल, कास्कीको स्थापना पश्चात विगत केहि वर्षदेखि नेवाः खल, कास्कीको आव्हानमा तायाः मचा नृत्य प्रतियोगिताको निरन्तरताले यो संस्कृतिको जगेर्नामा ठूलो योगदान पुग्दै आएको छ । हिजो ५÷७ वटा टोलबाट मात्र निकालिने ताया मचाः नृत्य आज आएर पोखराको विभिन्न ३५ वटा टोलहरुबाट यो नृत्य निकालिने गरिएको छ ।
प्रतियोगितमा कति टोलीको सहभागिता रहन्छ ?
नेवाः खल, कास्कीको आह्वानमा ताया मचा नृत्य प्रतियोगिता २०७६ यस वर्ष महेन्द्रपुल तायाः मचा समितिबाट आगामी साउन ३१ र ३२ गते शुक्रबार र शनिबार व्यापारिक केन्द्र महेन्द्रपुलको विशाल बजार अगाडी आयोजना हँदैछ । तायाः मचा नृत्यको संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्न २५ वर्ष अगाडी पहिलो पटक ताया मचा नृत्य प्रतियोगिता आयोजना गर्ने महेन्द्रपुललाई यस वर्ष तायामचा नृत्य प्रतियोगिताको आयोजक बन्ने अवसर प्राप्त भएको हो । यसलाई हामीले ठूलो उत्सवका रुपमा लिएका छौं । यस वर्षको प्रतियोगितामा भाग लिने जम्मा ३० टोली रहेका छन् । जसमा ६ वटा टोली महिला टोली रहेको छ ।
प्रतियोगितामा उत्कृष्ट हुनेलाई कसरी प्रोत्साहन गर्नुभएको छ ?
प्रतियोगिता भन्ने बित्तिकै उत्कृष्ट भन्ने कुरा पनि आइहाल्छ । हामीले उत्कृष्टलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरेका छौं । प्रतियोगितामा विभिन्न ८ विधाहरुमा पुरस्कार व्यवस्था गरिएको छ । प्रथम हुनेले रु. ३० हजार, द्वितीयले रु. २० हजार, तृतीय रु. १० हजार, सान्त्वना पुरस्कारका रुपमा रु. ५ हजार रहेको छ । यस्तै उत्कृष्ट ख्याली बजाउनेले, उत्कृष्ट बाद्यबादक, उत्कृष्ठ परि, र उत्कृष्ठ जोकरले रु. २ हजार ५ सय पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् । त्यसैगरी महिला सहभागी टोलीहरु मध्ये प्रोत्साहन स्वरुप एउटा टोलीलाई उत्कृष्ट घोषणा गरी रु. १५ हजार नगद र प्रमाण पत्र दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यक्रममा अन्य आकर्षणहरु के रहेका छन् ?
मुलत साँस्कृतिक पुर्नजागरण र जगेर्नाका लागि कार्यक्रम आयोजना गरिएकोले यसको मुल आकर्षण भनेकै हामीले मान्दै आइरहको संस्कृति नै हो । अर्थात तायमचा नृत्य प्रतियोगिता नै हो । यसका अलावा फुड स्टलहरुमा राखिएका विभिन्न परिकारहरुको स्वाद संगै विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम र तायाः मचा नृत्यको आनन्द लिन सकिन्छ । हामीले यस तायमचा नृत्यमा आज पर्यन्त सम्म टेवा पुर्याउनु भएका व्यक्तित्वहरुलाई पनि सम्मान गर्ने कार्यक्रम राखेका छौं ।
महेन्द्रपुलको मुल बाटो नै अवरुद्ध गरेर कार्यक्रम गर्न लागे भन्ने गुनासो पनि आए होला नि ?
हो पक्कै पनि । यो असुविधा प्रति हामी क्षमा प्रार्थी छौं । दुइ दिन ३१ र ३२ गते महेन्द्रपुलदेखि पालिखेचोकको बाटो प्रयोग गर्ने महानुभावहरुले बैकल्पिक बाटोको प्रयोग गरिदिन हामीले अनुरोध गरेका छौं । यो साँस्कृतिक पर्व भएकोले यसको जगेर्ना गर्नु सबैको दायित्व हो । हामीले त मात्रै संयोजन मात्रै गरेका हौं । यो सम्पुर्ण पोखरेलीको कार्यक्रम हो । हामीले अन्य खुल्ला ठाउँमा पनि कार्यक्रम गर्ने बारे नसोँचेको होइन । तर साँस्कृतिक पुर्नजागरण भनेको टोल टोलबाटै हुनुपर्छ भन्ने अवधारणाका साथ प्रत्यक वर्ष बिभिन्न टोलहरुका यो कार्यक्रम भइरहेका छन् । मलाई लाग्छ दुइ दिनको असुविधा भन्दा पनि ठुलो हामीले संस्कृति जगेर्नाका लागि आयोजना गरेका कार्य पुनित हो भन्ने लाग्छ । त्यसैले पोखरेली महानुभावले यसलाई आफ्नै कार्यक्रम सम्झेर अन्यथा मान्नुहुने छैन भन्ने पनि हामीले विश्वास लिएका छौं ।
कार्यक्रमका लागि सहयोग कसरी जुटाउनुभएको छ ?
विगतमा झै तायाः मचाः नृत्य प्रतियोगिता २०७६ सम्पन्न गर्न विभिन्न सरकारी निकाय बैंक तथा बित्तीय संस्था, व्यापारिक प्रतिष्ठान र उद्धार मनका धनी व्यक्तिहरुबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको छ । त्यसैरी तायाः मचा नृत्य प्रतियोगिता २०७६ को मुख्य प्रायोजकको रुपमा यस वर्ष रुपाकोट ज्योति सुन चाँदी दुकानको महत्वपूर्ण भूमिका प्रति आयोजक संस्था हार्दिक कृतज्ञता आभार प्रकट गर्दछौं । हामी सबै दाताहरु प्रति हार्दिक सम्मान भाव व्यक्त गर्दछौं । “तायाः मचा नृत्य प्रतियोगिता २०७६ भव्यताका साथ सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण पोखरेलीहरु बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरु, व्यापारिक प्रतिष्ठान, मिडियाकर्मी, ट्राफिक कार्यालय, सुरक्षा निकाय लगायत सम्बन्धित सबैलाई हार्दिक अपिल पनि गर्दछौं । संस्कृति संरक्षण हामी सबैको साझा दायित्व हो भन्ने भावनाको विकास गरौं । ताया ः मचा नृत्य प्रतियोगिता २०७६ लाई भव्यताका साथ सम्पन्न गर्न प्रवर्दकका रुपमा नेपाल पर्यटन बोर्ड र सहयोगी संस्थाको रुपमा पोखरा महानगरपालिकाको उपस्थितिले हामिलाई थप हौशला प्राप्त भएको छ ।